နအဖအင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိမ်ခြံဝင်းအတွင်း ၀င်ရောက်သူ အစစ်ခံချက်တချို့ ထွက်ပေါ်ဟု ပြောဆိုနေ။ | နစ်နေမန်း
နအဖအင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိမ်ခြံဝင်းအတွင်း ၀င်ရောက်သူ အစစ်ခံချက်တချို့ ထွက်ပေါ်ဟု ပြောဆိုနေ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေး စင်တာ (I.B.C)၊ အင်းလျားကန်ဘောင် ( တံတားနီ ) အနီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံက်အစော ရေကူးခတ်နေစဉ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ မစ္စတာ ဂျွန် ၀ီလီယံ ယက်ထော ( အသက်-၅၂ နှစ် ) အား စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှ လွဲပြောင်း ယူပြီး စစ်ကြောလျှက်ရှိရာ ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ ဖန်တီးထားသော အင်တာနက် စာမျက်နှာအချို့မှနေ၍ စစ်ဆေးချက် အချို့အား ဖေါ်ပြပါရှိလာကြောင်း သိရှိရသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံသား ဖြစ်သူ မစ္စတာ ဂျွန် ၀ီလီယံ ယက်ထော သည် အမေရိကန် နိုင်ငံ အမှတ် (31158) Deta Roadç Falconç 65470 Missouri တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ကာ Forest Institute တွင် Ph.D ( Psychology) ကို သင်ယူလျှက်ရှိသူ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြ ပါရှိခဲ့သည်။
မစ္စတာ ဂျွန် ၀ီလီယံ ယက်ထော ၏ အစစ်ခံချက် ဟု ပြောဆိုပါရှိ ချက်တွင် မေလ ၂ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ တဆင့်ရောက် ရှိလာပြီး ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ (၃၃) လမ်း၊ အမှတ် (၁၈၀/၁၉၂) ရှိ ဗျူးတီးလန်း ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုခဲ့ကာ (၃-၅-၀၉) ရက်နေ့တွင် ၄င်းဟိုတယ်မှ ညနေပိုင်းတွင် အငှားယာဉ်ဖြင့် အင်းယားမြိုင်လမ်း ဘက်သို့ ထွက်ခွာလာပြီး တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအနီး လမ်းဆင်းလျှောက်ကာ တောင်ကိုရီးယားသံရုံးအနီးရှိ အင်းယားကန်ဘက်အခြမ်းသို့သွားရောက်ပြီး ရေထုတ် သည့်မြောင်းအတွင်းမှရေကူးကာ အင်းယားကန်အတွင်းသို့ဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ ထို့မှတဆင့် ၄င်းသည် အင်းယားကန်အတွင်းမှ ရေးကူးလျှက် ဒေါ်စု၏ နေအိမ်ဘက်သို့ကူးခတ်သွားရာ (၄-၅-၀၉) ရက်နေ့ မိုးမလင်းမှီ ရောက်ရှိ ခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ်စု ၏ နေအိမ်တွင် ရှိသော အိမ်ဖော် (၂) ဦး နှင့် ဦးစွာတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၄င်းတွင် ဆီးချို ရောဂါရှိကြောင်း ယခု ရေကူး လာခဲ့ရသဖြင့် အလွန်မောနေပြီး ဗိုက်ဆာနေကြောင်းတို့ကိုပြောပြခဲ့ရာ အိမ်ဖော် (၂) ဦးမှ ထမင်း ကျွေးခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံ မလာရောက်မှီ က အင်တာနက် ပေါ်တွင် google earth မှ တဆင့် ဒေါ်စု ၏ နေအိမ်သို့သွားရောက် ရမည့်လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေခဲ့ကြောင်း၊ ရေးသားခဲ့ပြီး၊ မစ္စတာ ဂျွန် ၀ီလီယံ ယက်ထော သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ၂ ကြိမ် လာရောက်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ထိုအကြိမ်များ ကလည်း အလားတူ ရေကူး၍ ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး အချိန်ကြာကြာ နေခဲ့ဘူးကြောင်း၊ အစစ်ခံခဲ့သည်ဟု ဖေါ်ပြပါရှိသည် ကိုတွေ့ရသည်။
နအဖ ထောက်လှမ်းရေးများ ပြောသော မစ္စတာ ဂျွန် ၀ီလီယံ ယက်ထော နှင့် သူ ၏ ခရီးဆောင် ပစ္စည်းတချို့ (နအဖ ထောက်လှမ်းရေး)။
မစ္စတာ ဂျွန် ၀ီလီယံ ယက်ထော ကို အင်းယားကန်အတွင်း၊ ကန်သာယာဆေးရုံ တောင်ဘက် ခြမ်း မှ ရေကူးခတ်လာနေစဉ် ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း၊ ၄င်းထံမှ အနက်ရောင် ကျောပိုး အိတ် (၁)လုံး၊ အ၀ါရောင်ကျောပိုးအိတ်(အသေး) (၁)လုံး၊ ဓါတ်မီး (၁) လက်၊ ဓါတ်ခဲ (၂၈) လုံး၊ ခေါက်ပလာယာ (၁) လက်၊ Cannon အမျိုးအစား ကင်မရာ (၁) လုံး၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန် (၂) ရွက်၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀ တန် (၁) ရွက်၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၀ တန် (၁) ရွက်၊ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀၀၀ ကျပ်တန် (၉၃) ရွက်၊ လိပ်စာကဒ်မျိုးစုံ (၁၀) ခု၊ မျက်မှန် (၁) လက်၊ ဘောင်းဘီ ရှည် (၁) ထည်၊ အင်္ကျီ အဖြူ လက်ရှည် (၁) ထည်၊ ပတ်စ်ပို့စာအုပ် (၁) အုပ်၊ (၅) လီတာဝင်ရေသန့်ဗူးခွံ (၂) ဗူး၊ Memory Card (၆) ခု၊ ကုလား ဦးထုပ် (၁) လုံး နှင့် စာရေးထားသည့်စာရွက် (၇) ရွက်တို့ သိမ်းဆည်းရရှိ ခဲ့ကြောင်း၊ လောလောဆယ် အခြေအနေတွင် မစ္စတာ ဂျွန် ၀ီလီယံ ယက်ထော အနေ နှင့် တခြားသော မည်သည့် အချက်အလက် ကိုမှ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆို ခြင်း မရှိဘဲ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေကြောင်းများကို တိတိကျကျ ရေးသားပါရှိ လာခဲ့သည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံသားဖြစ်သူ မစ္စတာ ဂျွန် ၀ီလီယံ ယက်ထော၏ အခြေအနေ အရပ်ရပ်အား တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခွင့် ရရန်အတွက် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို အမေရိကန်သံရုံး က ခွင့်တောင်းခံ ထားကြောင်း၊ သို့သော်လည်း တုံ့ပြန်မှု တစုံတရာ မရရှိသေးပါ ဟု အမေရိကန် သံရုံး ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရစ်ချတ်မေး (Richard Mei) က လူထုအသံကို ပြောဆို ခဲ့သည်။
(လူထုအသံအွန်လိုင်းဂျာနယ် မှ ပြန်လည်ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်)။
This entry was posted on Sunday, May 10th, 2009 at 11:51 am and is filed under Posts.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.